Akụkọ Bible: Ndị Ikom Otu Kpakpando Duziri - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian American Sign Language Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chuvash Cinyanja Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Estonian Sign Language Ewe Faroese Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Japanese Sign Language Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Laotian Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Low German Luganda Lugbara Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Miskito Mixe Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Nicaraguan Sign Language Niuean Norwegian Nuer Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen (Cyrillic) Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Ukrainian Umbundu Venda Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Wolof Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Ị̀ NA-AHỤ kpakpando ahụ na-egbuke egbuke nke otu n’ime ndị ikom a na-atụ aka? Ọ bụ mgbe ha hapụrụ Jeruselem ka kpakpando a pụtara. Ndị ikom a si n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ. Ha na-amụ banyere kpakpando. Ha kweere na kpakpando ọhụrụ nke a na-eduga ha n’ebe otu onye dị mkpa nọ.
Mgbe ndị ikom ahụ ruru Jeruselem, ha jụrụ, sị: ‘Olee ebe nwata ahụ nke ga-abụ eze ndị Juu nọ? “Ndị Juu” bụ aha ọzọ nke ndị Izrel. ‘Anyị hụrụ kpakpando nke nwata ahụ na nke mbụ ya n’oge anyị nọ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ,’ ka ndị ikom ahụ sịrị, ‘anyị abịawokwa ịkpọrọ ya isi ala.’
Mgbe Herọd, bụ́ eze Jeruselem, nụrụ ya, obi ezughị ya ike. Ọ chọghị ka eze ọzọ weghara ọkwá ya. N’ihi ya, Herọd kpọrọ ndị isi nchụàjà wee jụọ ha, sị: ‘Olee ebe a ga-amụ eze ahụ e kwere ná nkwa?’ Ha zara ya, sị: ‘Bible sịrị na ọ bụ na Betlehem.’
Herọd wee kpọọ ndị ikom ahụ si n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ, sị ha: ‘Gaanụ chọpụta nwa ọhụrụ ahụ. Ọ bụrụ na unu ahụ ya, meenụ ka m mara. M chọrọ ijekwa kpọọrọ ya isi ala.’ Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na Herọd chọrọ ịhụ nwata ahụ ma gbuo ya!
Mgbe ahụ, kpakpando ahụ jere n’ihu ha ruo Betlehem, kwụsị n’ebe nwata ahụ nọ. Mgbe ndị ikom ahụ bara n’ime ụlọ ahụ, ha hụrụ Meri na obere Jizọs. Ha nyere Jizọs onyinye dị iche iche. Ma mgbe e mesịrị, Jehova dọrọ ndị ikom ahụ aka ná ntị ná nrọ ka ha ghara ịlaghachikwuru Herọd. Ya mere, ha si ụzọ ọzọ laghachi n’ala ha.
Mgbe Herọd nụrụ na ndị ikom ahụ si n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ alawo, ezigbo iwe were ya. O wee nye iwu ka e gbusịa ụmụntakịrị nwoke niile nọ na Betlehem, site ná ndị gbara afọ abụọ gbadata. Ma Jehova ebuwo ụzọ dọọ Josef aka ná ntị ná nrọ, ya na ezinụlọ ya wee gbalaa Ijipt. E mesịa, mgbe Josef nụrụ na Herọd anwụwo, o duuru Meri na Jizọs laghachi Nazaret. Ọ bụ n’ebe ahụ ka Jizọs nọ tolite.
Ònye ka i chere na ọ bụ ya mere ka kpakpando ọhụrụ ahụ pụta? Cheta na ndị ikom ahụ bu ụzọ jee Jeruselem mgbe ha hụrụ kpakpando ahụ. Setan bụ́ Ekwensu chọrọ igbu Ọkpara Chineke, ọ makwaara na Eze Herọd nke Jeruselem ga-anwa igbu ya. N’ihi ya, ọ ghaghị ịbụ Setan mere ka kpakpando ahụ pụta.
Matiu 2:1-23; Maịka 5:2.
Ole ndị bụ ndị ikom a nọ na foto a, n’ihi gịnịkwa ka otu n’ime ha ji na-atụ otu kpakpando na-egbuke egbuke aka?
N’ihi gịnị ka obi ji gharazie iru Eze Herọd ala, gịnịkwa ka o mere?
Ebee ka kpakpando ahụ na-egbuke egbuke dugara ndị ikom a, gịnị meziri ha ji si n’ụzọ ọzọ laghachi ná mba ha?
Olee iwu Herọd nyere, ọ bụkwa n’ihi gịnị?
Gịnị ka Jehova gwara Josef ka o mee?
Ònye mere ka kpakpando ọhụrụ ahụ nwuo, ọ bụkwa n’ihi gịnị?
Gụọ Matiu 2:1-23.
Afọ ole ka Jizọs dị mgbe ndị ahụ na-akọ banyere kpakpando bịara ileta ya, oleekwa ebe o bi mgbe ahụ? (Mat. 2:1, 11, 16)
Gịnị mere kpakpando ahụ ha hụrụ n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ ji bu ụzọ duru ha gaa na nke Eze Herọd chọrọ igbu Jizọs, kama iduga ha ozugbo n’ebe Jizọs nọ?